Jumeira University - Tacliinta Sare dibadda ee Dubai, Imaaraadka Carabta
gaabinta : OF KOORSADA
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Jumeira
Qor at University Jumeira
Jumeira University waa la aqoonsan yahay ah, hay'adda waxbarashada sare ee gaarka loo leeyahay in ay diyaarisaa ardayda shaqooyinka xirfadeed ee Business, Waxbarasho, Sciences Caafimaadka iyo Islamic iyo Carabi Studies.
Waxaa naga go'an in bixinta deegaan waxbarasho horumarsan iyo taageero in la aqoonsado tayo iyo kobciso caqiidada.
Waxaan ku siin jarida goobaha technology laayeen la fursadaha in ay bartaan Ingiriisi iyo Carabi iyo siiyaan xarumaha cilmiga iyo madadaalo u gaar ah labada ardayda lab iyo dhaddig.
Ku soo dhawow safar xiiso leh waxbarasho la University Jumeira.
At University Jumeira waxaannu raaci hab guud si ay waxbarashada si ay u horumariyaan ardayda galay shakhsiyaadka qalabaysan luuqeeyo in dhammaan qaybaha nolosha oo ka tarjumaya arinkii ku aragti ah Imaaraadka Carabta.
Iyada oo tacliin heer sare, ixtiraam qoto dheer waayo qiyamka, dhaqanka iyo diinta, iyo sidoo kale furitaankii a waxbarasho, waxaan ujeedadoodu tahay in aad loo Waxyoodo ahayn si ay u gutaan kara tacliinta iyo shakhsi aad si buuxda u.
Waxaan kibir qaataan noo dhaqanka iyo hiddaha. Our aaminsan yahay iyo qiyamka waa dhagax geeska of our hab si jawi waxbarasho oo casri ah isku duubay qiyamka Islaamka iyo dhaqanka maxalliga ah.
Si ardayda jaamacadda Jumeira, waxaanan ballan qaadaynaa waayo-aragnimo waxbarasho oo dhab ah. Waxaan aad fikirkooda ku saabsan mustaqbalka, sahamiyaan fursadaha aad oo ay noqoto qofka aad rabto in aad noqon: masuul ka, qayb guul iyo qiimo aad bulshada.
Nagu soo biir maadaama aan koraan Safar ah waxaa ka mid ah waxbarashada, daahfurka gelin iyo rajo gelin.
Mudane. Abdulla AIMuhairi
website rasmiga ah: http://ju.ac.ae/
College of Sciences Caafimaadka
College of Islamic & Studies Carabi
Ma rabtaa wada hadlaan University Jumeira ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Jumeira on Map
Photos: Jumeira University rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Jumeira
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Jumeira.